LOUELLA MICHIE နှင့် CEON BROUGHTON တို့၏ဇာတ်လမ်း - BESTIVAL တွင်တစ်ညသည်သေခြင်းနှင့်ထောင်ဒဏ်ကျခြင်းတို့အဆုံးသတ်ခဲ့သည် - သတင်း
Bestival 2017 ၏တနင်္ဂနွေနေ့တောအုပ်၌ Louella Michie သည် 2C-P အချို့ကိုယူခဲ့သည်။ ငါ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုငါမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဒီဟာနေမကောင်း ဒါအံ့သြစရာပဲ။ ဒီအစစ်အမှန် shruv, bruv ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းအသံသွင်းထားတာသေချာအောင်သူမကသူမရဲ့ရည်းစား Ceon ကိုသူမစပြီးစကားပြောနေချိန်မှာပြောခဲ့တယ်။ Ceon သည်စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးခြောက်နာရီအကြာတွင် Louella သေဆုံးခဲ့သည်။
Ceon သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကလူသတ်မှုဖြင့်ရှစ်နှစ်ခွဲချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ Louella သေဆုံးပြီး Ceon အားလူသတ်မှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ခြင်းသည်သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပုံနှင့်တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲတော်တစ်ခုတွင်မည်သို့အဆုံးသတ်သွားသည်ဟူသောဇာတ်လမ်းဖြစ်သည်။
Louella နှင့် Ceon တို့သည်လန်ဒန်မြိ့ုနယ်၏တူညီသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနုပညာ၊ တေးဂီတနှင့်ယောဂပညာများကိုပေါင်းစပ်။ ကောင်းမွန်သောအဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ထားသည့်လူအုပ်စုဖြစ်သည်။ Louella ၏ Instagram သည်ခရီးသွားခြင်း၊ ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့်ဓါတ်ပုံများကိုသူမအားလူတိုင်းနှင့်ရင်းနှီးသောမိန်းကလေးအဖြစ်ဖော်ပြသောအိမ်ထောင်ဖက်များနှင့်အတူပုံဖော်သည်။
မျှဝေသည် လူမီချီမိုက်®™ 1:34 pm တွင် PDT မှာစက်တင်ဘာလ 22, 2016 တွင် (@louella_eve)
Louella ရဲ့အဖေက Corrie နဲ့ Holby City သရုပ်ဆောင် John Michie ။ အဆိုပါ Holby ကြယ်ပွင့်ရဲ့သမီး tag ကိုသူမ၏အသေခံသို့ရုံးတင်စစ်ဆေးမတိုင်မီသူတို့ Holby ပရိတ်သတ်တွေဖြစ်လျှင်ဂျူရီမေးမွနျးခဲ့ဤမျှလောက်သူမ၏လွှမ်းခြုံနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
သို့သော်သူမကိုသိသောလူများကသူမအားထို tag ကိုခွဲခြားထားကြသည်။ သူမသေဆုံးပြီးနောက် The Tab အတွက်အခမ်းအနားအတွက်အခမ်းအနားတစ်ခုကိုရေးသားခြင်းတွင် Louella ၏သူငယ်ချင်း Morgan Elliot ကသူမတွင်နာမည်ကျော်ဖခင်ရရှိသောကြောင့်သူမသည်အခွင့်ထူး၊ လူလတ်တန်းစား၊ တကယ်တော့ Louella ဟာမင်း၊ ငါနဲ့တခြားလူတစ်ယောက်လိုသာမန်လူတစ်ယောက်ပဲ။
Louella သည်လန်ဒန်အရှေ့ပိုင်းရှိ Hoxton အနုပညာပြခန်းတွင်သူမနှင့်ယောဂသင်တန်းများတက်ခဲ့ဖူးပြီးမြောက်နှင့်အရှေ့လန်ဒန်တစ်ဝိုက်တွင်လူသိများသည်။ သူမသည်သူမ၏အစ်ကိုဖြစ်သူဆမ်နှင့်အတူပွဲလမ်းသဘင်များသို့သွားခဲ့သည်။ သူမတွင်ညီမ Daisy ရှိသည်။
မျှဝေသည် လူမီချီမိုက်®™ 4:24 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 25, 2016 တွင် (@louella_eve)
မှုန်ရေမွှားမီနှင့်အပြီး ariana Grande
Ceyon Broughton သည် Rapper အမည် CEONRPG ဖြင့်သိလျှင် Skepta နှင့်မိတ်ဖက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Instagram တွင်နောက်လိုက် ၂၂ ယောက်ရှိသည်။
သူသည် Soho ရှိ Supreme ဆိုင်နှင့် ၂၀၁၅ တွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ကျောက်ခေတ်ကျွန်းနှင့်၎င်းတို့၏ပူးပေါင်းမှုအတွက်လုပ်ပါတယ်။ MOBO Awards တွင်သူသည် Sadiq Khan နှင့်အတူပုံဖော်ခဲ့သည်။
Ceon ၏ဂီတကို Laigon Life တံဆိပ်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့ပြီးသူသည် Lil Peep နှင့်တွဲဖက်ခဲ့သည်။
⛓? ⚔️? ⛓
မျှဝေသည် ??????????? ? 9:51 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 3, 2017 ရက်တွင် (@laigonlife)
Louella သေဆုံးပြီးတစ်လနှင့် Lil Peep မတော်တဆမူးယစ်ဆေးအလွန်အကျွံသုံးစွဲထံမှသေဆုံးမတိုင်မီတစ်လ Lil Lil Peep ပင် Ceon သည်သူ၏ Instagram ကိုအပေါ်ကြွေးကြော်သံကိုပေး၏။
၂၀၁၆ ဇွန်လတွင် Louella နှင့် Ceon တို့သည် Hampstead Heath တွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ယခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်သူတို့သည်ဝန်များကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်ပြီးတရားဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြသည်။ Bestival တွင် ၀ င်ရောက်စားသုံးခြင်း၊ ခရစ္စမတ်ပွဲသို့ Ceon တက်ရောက်ခြင်း၊ အတူတူ Ben Nevis ကိုတက်ခြင်း။
အတူတူဟယ်လိုဝင်းပါတီပွဲတစ်ခုမှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာ elves တွေလိုဝတ်ဆင်ကြတယ်။ Louella ရဲ့အဖေရဲ့ 60 မှာ Ceon မိသားစုနှင့်အတူရှိ၏။
ST လိရှယ်။ #C? ❄️☃✨ ???
မျှဝေသည် လူမီချီမိုက်®™ 6:08 pm တွင် PST မှာဒီဇင်ဘာလ 25, 2016 တွင် (@louella_eve)
Louella ကသူမထဲကိုဝင်လာပြီးသူမအိပ်ခန်းရဲ့နံရံပေါ်မှာ Laigon Life graffiti ကိုခြယ်သခဲ့တယ်။
ရုတ်တရက်ခရစ်စမတ်ပြီးနောက် Ceon သည် Louella နှင့်ပြိုကွဲသွားသည်။ သူမ၏မိခင်အဆိုအရသူမသည်အဘယ်ကြောင့်အမှန်တကယ်မသိခဲ့ပါနှင့်ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါအမေဝေးရရန်ရှိသည်။ ငါသူမကပြောသည်လမ်း၌သူ့ကိုသို့တိုးမြှင့်မထားနိုင်, LA ကသို့သွားကြ၏။
? JETLAGGED? #? ⌛️⏳
မျှဝေသည် လူမီချီမိုက်®™ 9:20 pm တွင် PST မှာမတ်လ 7, 2017 ရက်တွင် (@louella_eve)
Ceon သည် 2017 ခုနှစ်အစတွင်မြောက်အမေရိကသို့ ဦး တည်သွားသော်လည်းတိုရွန်တိုသို့သွားခဲ့သည်။ အဲဒီမှာသူမအဖြူအမှုန့်တစ်ဇွန်းပေးတဲ့အခါသူကသူမရဲ့အတွင်းခံအဝတ်အစားမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာသူကသူမကိုပိုပြီးလုပ်ဖို့ပြောတယ်။ သူမတုံ့ဆိုင်းစွာဖြေလိုက်တဲ့အခါသူက - မဟုတ်ဘူး၊
မိမိအရှေ့နေများကအမှုစိတ်စွန်းကွက်မယ်လို့စောဒကတက်သည်အဖြစ်တစ် ဦး စွဲ၏ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်တက်ကျင်းပဗီဒီယို, ရုံးတင်စစ်ဆေးအတွက်ဂျူရီမှပြမခံခဲ့ရပါဘူး။
LA ပြီးနောက် Louella တွင်နွေရာသီပွဲတော်များအပြည့်ရှိပြီး Gottwood, Ibiza, Wilderness နှင့် Secret Garden Party သို့သွားခဲ့သည်။ Ceon နဲ့သူမပြန်လာပြီးနောက်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ Glastonbury ကိုသွားခဲ့တယ်။ Ceon သည် 2C-P အချို့ကိုပွဲတော်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။ နို ၀ င်ဘာလတွင် Louella သေဆုံးပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် Ceon သည် Louella နှင့်မိတ်ဆွေတစ် ဦး အား Glastonbury တွင် 2C-P နှင့် Bestival ၌ထောက်ပံ့ရေးအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
မျှဝေသည် လူမီချီမိုက်®™ 12:42 pm တွင် PDT မှာသြဂုတ်လ 9, 2017 ရက်တွင် (@louella_eve)
ဇူလိုင်လမှာသူဟာ Skepta မှထုတ်လုပ်တဲ့ Duracell ဆိုတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့ပြီး Louella ရဲ့အစ်ကိုဆမ်ကဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ အထဲတွင်, Ceon ရဲ့တစ် ဦး တောခုတ်ဓားနှင့်အတူ posing, တစ် ဦး သစ်တောအတွက်နိုက်အဖြစ်ဝတ်ဆင်။
Bestival မတိုင်မီတစ်လအလိုတွင် Ceon သည်ဓားကိုင်ဆောင်ထားသည့်အရေအတွက် ၂ ခုအတွက်ဆိုင်းငံ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ ဒီဝါကျကိုအသက်သွင်းဖို့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကသူမအတွက် Louella ကိုမကူညီနိုင်အောင်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တယ်
Louella သည် Bestival သို့သွားရန်စီစဉ်နေခြင်းမဟုတ်သော်လည်း Ceon ဖြစ်သဖြင့်သူမ၏အမေကပြောကြားခဲ့သည်။
ငါနည်းနည်း up upeded
သောကြာနေ့ကလန်ဒန်မှ Dorset ရှိ Bestival ၏ site သို့ကားမောင်းလာသောအခါ Louella ကသူမ၏တဲကိုထူထောင်လိုက်သည်။ နံနက်စောစောအချိန်များတွင်သူမ WhatsApped Ceon သည်သူမဆေးပြားသောက်နေသည့်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်တန်းခဲ့သည်။ ထို Tab သည်ထိုမက်ဆေ့ခ်ျများကိုပြန်ဖွင့်ထားသည်။
စနေနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် Ceon ရောက်သောအခါသူသည်သူမ၏တဲ၌နေပြီး၊ သူတို့သည်မနက် ၅ နာရီအထိနေခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုတစ်ခုက Ceon နဲ့ Louella ကိုတဲတစ်ခုမှာပြနေသည်။ သူတို့ကရယ်မောနေပြီး Louella ရဲ့ဆံပင်တွေဟာအစိမ်းရောင်အဖုံးနဲ့နောက်ပြန်ပေါ်ကသူမအချို့နတ်သမီးပုံပြင်အလင်းရောင်တွေနဲ့ကစားနေပြီးကင်မရာကသူမ၏လက်ကောက်ဝတ်မှာပွဲတော်ခုံများနှင့်ပြည့်နေသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် Louella သည်အပန်းဖြေပမာဏ MDMA, ketamine နှင့် Valium ပမာဏကိုယူပြီး Ceon သည်ကိုကင်းကိုသောက်သည်။ ရာသီဥတုဆိုးရွားမှုကြောင့်ပွဲတော်၏အဓိကနယ်ပယ်ကိုညနေ ၄ နာရီတွင်ပိတ်ခဲ့သည်။
လူအများစုကစခန်းချနေရာသို့ပြန်ရောက်ကြစဉ် Louella နှင့် Ceon တို့သည်ပွဲလမ်းသဘင်သို့မသွားမီ toastie ဆိုင်သို့သွားကြသည်။ CCTV ရုပ်ပုံများကသူတို့ကိုအတူတကွလမ်းလျှောက်နေသည်ကိုပြသည်။
Louella ရဲ့အနက်ရောင် trackies နှင့်မီးခိုးရောင် hoodie ဝတ်ဆင်နေစဉ်, ညနေ4ပြီးနောက်ရုံယူ CCTV ရုပ်ပုံများအတွက်, Ceon ရဲ့ hi-vis ဘောင်းဘီနှင့်အနက်ရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်။
Louella သည် 2C-B နှင့်ဆင်တူသော class A ဒြပ်စင်တစ်ခုဖြစ်သော 2C-P ကိုယူခဲ့သော်လည်းပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စကဘယ်သူမှမသေဘူးလို့တရားရုံးကကြားတယ်။
သငျသညျ instagram အပေါ်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုဖျက်ပေးလျှင်အခြားလူတစ်ဦးသိတတ်
Louella ရဲ့ထိုး - Ceon အားဖြင့်တက်တိုး - ပုံမှန်ထက်ခြောက်ဆပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ သူမသည်ပြီးခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေ ketamine နှင့် MDMA ယူချင်ပါတယ်။ အဆိုပါ 2C-P ကိုကန်သောအခါ, pair တစုံပွဲတော်ရဲ့ပတ်လည်အတိုင်းအတာအပြင်ဘက်အချို့သောတောအုပ်သို့အချို့သောတောအုပ်သို့ခြံစည်းရိုးကျော်တက်ခဲ့သည်။
ငါ့ဘဝမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုကိုငါမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူး။ ဒီဟာနေမကောင်း ဒါအံ့သြစရာပဲ။ ဒီအစစ်အမှန် shruv, bruv ဖြစ်ပါတယ်။ မင်းရိုက်ကူးထားတာသေချာအောင် Louella ကညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် Ceon သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
မကြာခင်မှာပဲအမှုအရာအလှည့်ကိုယူ။ Louella ကလှိမ့်ထွက်သွားတယ်။ ဆူးတွေစားပြီးအော်ငေါက်တယ်။ Ceon ကတော့ရယ်ရင်းနဲ့ဆက်ရိုက်နေတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူသည်သူမ၏ခရီးစဉ်ကို ၅၁ မိနစ်ကြာရိုက်ကူးခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏အမေကိုဖုန်းခေါ်ရန် Ceon သို့အော်ဟစ်နေစဉ် Ceon ကသူမ၏ဖုန်းကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ပြောခဲ့သည်။
ညနေ ၆:၄၈ နာရီတွင် Ceon သည် Louella ၏မိသားစုကိုခေါ်။ သူမမှာခရီးစဉ်မကောင်းကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူမ၏အစ်မဒေစီတွင်အသံချဲ့စက်ဖြင့်ဖုန်းပြောပြီး Louella ၏အော်သံကိုမိသားစုကကြားနိုင်သည်။ ဒေစီကအပေါ်ထပ်ကိုဖုန်းခေါ်တယ်။ Ceon က - ငါ Louella မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲတယ်ဆိုတာမင်းရဲ့အမေကိုမပြောပြချင်ဘူး
Louella ယူမူးယစ်ဆေးဝါးများ, Ceon ရဲ့ဖုန်းအမှု၌တွေ့
အဆိုပါအော်ဟစ်သံကိုကြားပြီးနောက် Louella ၏အဖေ၊ ဂျွန်နှင့်သူမ၏မိခင်ကာရယ်တို့သည် Louella ကိုရောက်ရန်လန်ဒန်မြောက်မှ Dorset သို့မိုင် ၁၃၀ ခရီးကိုထွက်သွားကြသည်။
သူတို့ကားမောင်းရင်း Louella ၏အဖေနှင့်အစ်ကိုကသူမဆေးကုသမှုခံယူရန်ကြိုးစားခဲ့သလားဟုမေးမြန်းကာ Ceon ကိုစာပို့ခဲ့သည်။ Ceon က Sam ကိုတစ်နာရီအကြာဖုန်းဆက်သည်။
Louella က 2C-P ကိုယူသလားလို့မေးတယ်။ Ceon ကပြန်ပြောတယ်။ အင်း၊
အဆိုပါတရားစွဲဆိုမှုအဆိုအရ Ceon လည်းမိတ်ဆွေတစ် ဦး မှစာသားကိုပေးပို့: ငါအိတ်များမရနိုင်ပါ။
သူတို့ရောက်ရှိလာသောအခါလုံခြုံရေးပွဲတော်သို့ Louella ရဲ့မိဘများကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူး။ ဂျွန်ကသူ့အားသမီးကိုရှာခိုင်းပါရန်တောင်းပန်ကြောင်းတရားရုံးသို့ပြောကြားခဲ့သည် ကာရယ်လ်က 'သူတို့တွေဟာစိတ်ရှုပ်ထွေးတဲ့မိဘတွေဒီမှာရှိနေတယ်' လို့ထင်ကောင်းထင်ကြလိမ့်မည်။
မိန်းကလေးတစ် ဦး တွေဆီကနေအောင်ဘယ်လို
Ceon ကသူမကိုရှာရန်ကူညီရန် Google Maps တံသင်ကိုလွှတ်လိုက်သည်။ သူလည်း Louella မကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်ရှိခဲ့ကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြ, 11:24 ပြီးနောက်ရုံလုံခြုံရေးသွား၏, ဒါပေမယ့်ရှာဖွေရေးသူမ၏ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ John သည်လုံခြုံရေးအစောင့်တစ်ယောက်အားသူ၏ဖုန်းကိုယူပြီး Louella ကိုရှာဖွေရန်ထိုတံသင်များကိုအသုံးပြုသည်။
ည ၁၁း၃၀ နာရီခန့်တွင် Ceon သည် Louella ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးသူမသည်သူမလိမ်နေကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ဤအချက်အားဖြင့်သူမကသေပြီဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သူနာပြုတစ်ယောက်ဟာသူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနံနက် ၁ နာရီမှာတွေ့ရှိတဲ့အခါသူမမှာအနီရောင်တက်တူးထိုးထားတယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့တယ်။ Ceon အားလုံခြုံရေးအရ ဦး ဆောင်ခေါ်ယူခဲ့ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုအတွက်နံနက် ၄း၁၀ နာရီတွင်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။
ဒါဟာ Louella ရဲ့ 25 နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဖြစ်ရပြီလိမ့်မယ်။
Ceon ကအကူအညီမပေးတာကြောင့်ဝေဖန်ခံခဲ့ရတယ်။ သူ၏ရုံးတင်စစ်ဆေးမှုတွင်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး က Louella သည်ကျွမ်းကျင်သူအကူအညီရခဲ့လျှင်အသက် ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိရှင်သန်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်ဟုဆိုသည်။ Louella ပွဲတော်ရဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတဲကနေမီတာ 400 တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Ceon ရဲ့ကာကွယ်ရေးသူကသူ့ကိုတောအုပ်ထဲကသယ်ဆောင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဆူး, တောင်ကုန်းများနှင့်ဆူးပင်ပေါက်သူ့ကိုရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်းစောဒကတက်ခဲ့ကြသည်။
စက်တင်ဘာလ 13 ရက်နေ့တွင်, Ceon Louella ရဲ့လူသတ်မှုနှင့်အတန်းအစားတစ် ဦး မူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
Louella ရဲ့သူငယ်ချင်း The Times သတင်းစာကိုပြောကြားခဲ့သည် သူတို့ Ceon အပေါ်အချို့သောကိုယ်ချင်းစာရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါကငါသို့မဟုတ်ငါ့အဆွေခင်ပွန်းမဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကပြောသည်။ လူတွေကသူမသူမကိုကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေသည်ကိုကြည့်ပြီးသူမသေနေပုံရတယ်ဒါပေမယ့်ပွဲတော်ကိုသွားတိုင်းငါသူငယ်ချင်းအနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကကြမ်းပြင်ပေါ်မှာလဲလျောင်းနေတာကိုသူတို့မြင်နေရတယ်၊ သင်အမှန်တကယ်တစ် ဦး ဘဝ - သို့မဟုတ်သေခြင်းတရားအခွအေနေအဖြစ်ကအသိအမှတ်မပြုကြဘူး။ လူတိုင်းကလုပ်နေကြသည်။ ဒါဟာပွဲတော်လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေပဲ။ Ceon အားမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသောရာဇဝတ်ဂိုဏ်းသားအဖြစ်ပုံဖော်ခံရသော်လည်းသူသည်အလွန်ရိုးသားဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သည်။ သူကမူးယစ်ဆေးရောင်းဝယ်သူမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာစာသားကံဖြစ်ခဲ့သည်။
သူသည်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်လူသတ်မှုအတွက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
ထိုနွေရာသီတွင်သူသည် Parklife တွင် Skepta နှင့်အတူနောက်ကွယ်၌ပုံဖော်ထားသည်။
မျှဝေသည် ??????????? ? 9:56 pm တွင် PDT မှာဇွန်လ 12, 2018 ရက်တွင် (@laigonlife)
သူ၏အမှုအားယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၄ ရက်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးသူသည်အပြစ်မရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
Louella ကွယ်လွန်ချိန်တွင် Louella ကွယ်လွန်သွားချိန်တွင်အဆိုပါတရားခွင်သည်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Louella ၏မိဘများကသက်သေအထောက်အထားများပေးကြသည်။ Ceon သက်သေအထောက်အထားမပေးခဲ့ပါဘူး
ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း Louella ၏မိသားစုသည်တရားရုံးတော်အပြင်ဘက် Ceon နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ သူမ၏အဖေကသူ့ကိုမကောင်းဆိုးဝါးဟုခေါ်ခဲ့သည်။ သူမညီမ Daisy က“ မင်းတို့စိတ်မကောင်းဘူးလို့ငါတို့ကြားချင်တာပဲ။ Ceon သည်ရေအေးနှင့်စားပွဲတစ်လုံးကိုရိုက်ချိုးလိုက်ပြီးထိန်းထားရန်လိုသည်။
Ceon သည်လူသတ်မှုနှင့်အတန်းအစား A မူးယစ်ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှုဖြင့်ထောင်ဒဏ်ရှစ်နှစ်ခွဲချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
စီရင်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်မှာ Louella ရဲ့အဖေဂျွန်က“ Louella ရဲ့ ၂၅ နှစ်မြောက်မွေးနေ့ကိုငါတို့ဘဝမှာထောင်ချခဲ့တယ်။ Ceon ရဲ့ဘဝဝါကျသူ Louella အသက်ရှင်ရန်မကူညီခဲ့ဘူးသိ။ ဖြစ်ပါတယ်။